Ahlusuna waljamaaca “Shirka ka socda Cadaado, Waxaa isugu tagay Dallaaliin” – SBC
Ahlusuna waljamaaca “Shirka ka socda Cadaado, Waxaa isugu tagay Dallaaliin”
Posted by Webmaster on December 15, 2011 Comments
Maamulka dhexe ee Ahlusuna waljamaaca ee gobolka Galkgaduud ayaa ka hadlay Kulan degmada Cadaado uga soconaya saraakiil ka kala tirsan Maamulada ka jira gobolada dhexe ee dalka .
Waxa ay sheegeen saraakiisha maamulka Ahlusuna Waljamaaca in uu shirkaasi yahay mid la doonayo in lagu shirqoolayo umada Soomaaliyeed laguna dhibaateynayo.
Sh Axmed C/laahi Maxamuud (Ilka case) waa gudoomiye ku xigeenka labaad ee gudiga Fulinta Ahlusuna waljamaaca waxaanu u sheegay xafiiska SBC ee Galgaduud in kulankaasi lagu abuurayo dhibaatooyin loo geysto bulshada soomaaliyeed,, waxaanu ku tilmaamay in ay isugu tageen dad iyagu dulaaliin ah .
“bulshada waxaan ugu baaqeynaa in ay figrad sax ah in ay ka qaataan oo aan laga dhaadhicin figrado qaldan, waxaana halkaasi ku kulmaya qolo dulaaliin ah” ayaa ka mid ahaa hadalada Sh Axmed C/laahi Maxamed .
Dhinaca kale la taliyaha Madaxweynaha Mamulka Ximan iyo xeeb Cumaan Maxamed Cali waxa uu ku sheegay kulan saxaafadeed uu ku qabtay Degmada Cadaado ee Gobolkaasi Galgaduud in kulanka ka dhacaya Cadaado uu yahay mid la doonayo in la isugu keeno, laguna heshiisiiyo, xiriir wanaagsana lagu dhexdhiyo maamulada ka jira Gobolada dhexe ee Soomaaliya, waxaanu ugu baaqay Maamulka Ahlusuna waljamaaca oo ka mid ah Maamulada ka jira gobolada dhexe in ay ka soo qeyb galaan ayna ku soo dhaweeynayaan.
Sikastaba ha ahaatee arimahani ayaa waxaa ay ku soo aadayaan xili Maalmihii ugu dambeeyay ay soconayeen kulamada Maamulo ka mid ah maamulada kajira Gobolkada dhexe ay isugu imaanayeen degmada Cadaado, kuwaasi oo kala sita magacyo kala duwan sida, Hiiraan Land, Ceelbuur Land, Dooxa Star, Ximin iyo Xeeb, iyo weliba Magacyo kale oo ay wataan.
SBC International Galbaduud.